I-Finch ene-Tom Hanks, iya kuba kwi-Apple TV + | Ndisuka mac
UApple ufuna ukuqhubeka nokongeza indalo esemgangathweni kwiApple TV +. Ngale nto, ngexesha lefandesi ebibambeke kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, babhenela amalungelo kumdlalo bhanyabhanya u-Finch obekade ephumelele u-Oscar uTom Hanks. Baphumelele ibhidi Kwaye ke baphumelele ilungelo lokuveza ifilimu yalo mdlali ubalaseleyo kweli qonga.
Abo banoxanduva lwe-Apple TV + bakwazile ukuphumelela ifandesi yamalungelo kwifilimu eneenkwenkwezi uTom Hanks. I-Finch eyayisaziwa ngokuba yi-Bios ithathwa njengoluhlobo lwe-sci-fi eyayilungiselelwe ukuba ikhutshwe yi-Universal. Kulindelwe ukuba Inkulumbuso yeyokuphela konyaka. Ukuhambelana nexesha lokunikezelwa kwamabhaso.
Umboniso bhanyabhanya ekhokelwa nguMiguel Sapochnik, Ngubani owalathise ezinye zezigigaba zeMidlalo yeTrone, ngaloo ndlela waphumelela enye yeeEmmy zakhe ezimbini ezazifumene kuthotho. Iskripthi siwela ku-Craig Luck kunye no-Ivor Powell, owokugqibela owayengumdibanisi we-Blade Runner kunye ne-Alien. Ifoto iveliswa nguKevin Misher, uJack Rapke, uJacqueline Levine, noPowell. Abavelisi abalawulayo nguRobert Zemeckis, uLuck, uSapochnik, uAndy Berman kunye noAdam Merims.
KwiFinch ,Indoda, irobhothi kunye nenja zenza usapho olungaqhelekanga. UHanks udlala uFinch, injineli yeerobhothi kunye nomnye wabasindileyo kumsitho welanga oshiye umhlaba uyinkangala. Umlinganiswa ophambili ebehlala kwigumbi elingaphantsi komhlaba iminyaka elishumi kwaye uzakhele umhlaba kunye nenyani yakhe awabelana ngayo nenja yakhe, uGoodyear.
Ukuze ukhathalele inja, yenza irobhothi (edlalwa nguCaleb Landry). Njengoko i-trio iqala uhambo oluyingozi ukuya kwi-West West, i-Finch izabalaza ukubonisa indalo yayo uvuyo kunye nokuzibuza ukuba kuthetha ntoni ukuphila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » Gqibezela u-Tom Hanks ukuba abe kwi-Apple TV +